NOOCYADA TIKHORETSKY MADOW OO TURKIGA AH - BEERAHA DIGAAGA
Ugu Weyn Ee Beeraha digaaga
Turkiga waxay ku dhalatay Black Tikhoretskaya
Turkiga ayaa muddo dheer lagu xannaaneeyay qoysaska sida digaaga.
Xayawaankani waxaa lagu qiimeeyaa miisaankooda aadka u fiican, sida turki wanaagsan oo culeyskiisu yahay miisaankiisu waa 20 kg.
Intaa waxaa dheer, hilibka turkiiga ah ayaa aad u qiimeeya macaamilka iyada oo ay ugu wacan tahay suuqgeeda cuntada iyo dhadhanka. On beeraha waaweyn waxaa jira turkiga badan sida ay leeyihiin digaagga, sababtoo ah kicinta shimbirahan waa mid aad u kharash badan.
Turki Black Tikhoretsk waa dad aad u caan ah oo ku takhasusay xoolaha sababtoo ah dhamaan sifooyinka wanaagsan.
Sharaxaad guud ee nalka, iyo sidoo kale dhammaan faahfaahinta daryeelka ee shimbiraha kuwan lagu sharaxay qodobkan.
The Black Turtle Black Tikhoretskaya dhalashada asal ahaan 50s ee qarnigii 20aad.
Noocan ah zootechnician ee gobolka Krasnodar. Beeralayda digaaga ee degmada Tikhoretsk ayaa doortay shakhsiyaadka ugu wanaagsan ee ka soo jeeda turjubaanka maxaliga ah ee hareeraha ugaga soo horjeeda wakiillo ka socda Bronze Shirokogruday. Dabadeedna shimbiraha ugu wanaagsan ayaa laga soo doortay kalluunka, kuwaas oo iskood u dhex maray iyo turkiga bronz.
Meelaha loo qaybiyo turkiga waa mid aad u ballaadhan - wakiillo ka socda noocyadaas waxaa laga heli karaa beeraha badan ee wadamada CIS.
Turka Black Tikhoretsk waa wakiillada turkiga fudud. Waxay magacooda u qaateen midabkoodu uu yahay midabka madow - waa madow, dhalada qorraxda, iyo daboolka waxaa sidoo kale ku jira baalal naxaas ah.
Torso ee shimbirahaasi waa mid xooggan, jidhkuna waa yar yahay, laakiin ballaaran, madaxu waa dhexdhexaad.
Turkiga kuwani waxay leeyihiin muuqaal kala duwan - baadad furantaas oo ku fadhiisanaya farabadan ka soo salka qoorta. Qaabkani wuxuu si fiican u calaamadsan yahay turkiga dadka waaweyn. Gagaarka shimbirahaasi waa mid ballaaran oo ballaaran.
Turka Black Tikhoretsk waa mid aad u firfircoon, oo lagu gartaa habka ugu wanaagsan ee lagu hayo xaalad kasta oo xabsi ah, taas oo ah, shimbiruhu waxay noqon doonaan kuwo wanaagsan iyo xaaladaha xorta ah, iyo marka la dhigo baqashada. Laakiin waxay u baahan yihiin in la siiyo dhul dhul ah oo ay awoodaan inay socdaan, maaddaama tilmaamayaasha waxqabadka ee wakiillada noocaani ay yihiin kuwo duurjoog ah.
Adult Celcelis turkey oo miisaankiisu yahay 10-11 kg, iyo turkey oo miisaankiisu yahay 5-6 kg. Qiyaastii 60% dufanka hilibka digaaga ah waa hilib, taas oo ku haboon isticmaalka.
Poults carruurta toddoba toddobaad jir ah oo miisaankoodu yahay inta u dhaxaysa 3 iyo 4 kg. Waxaad horay u dhalin kartaa da'da this, laakiin badanaaba ma'aha, sababtoo ah shimbirku wuxuu ka heli karaa culeys dheeraad ah.
Tayada hilibka ee xayawaanka yaryar waa mid aad u fiican, inkastoo da'da hore. Guud ahaan, tayada hilibka digaaga ee taranka ayaa ka sii badan xitaa xayawaanka caleenta ee ballaaran. Sidoo kale awooda ayaa laga arki karaa arrinka kaydka dufanka ee jirka.
Black Tikhoretsk Black iyo turkiga waa cadaadis ku adkaysi leh. Dumarka noocan ah waa hooyooyin fiican.
Hal xilli ciyaareed, wax ka badan 80 ukumood ayaa laga heli karaa turki kasta, taas oo ah celcelis ahaan tirada marka la barbardhigo naasaha kale. Qiyaastii 80% ukumo lagu dhajiyo maskaxda ayaa horumarin doonta poults turkey.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo daaweynta turkiga.
Marka ilaalinta shimbiraha this, waxaa lagama maarmaan ah in ay iyaga siiyaan qol diiran oo qallalan, halkaas oo drafts ma socdaan xitaa xilliga jiilaalka. Xayawaankani waxay u dulqaadanayaan si fiican qabow, ilaa iyo inta uu guriga la daboolayo intii suuragal ah.
Ilaa ay jirto hargab xoog leh, qolka xitaa lama kululeyn karo, laakiin marka cimiladu noqoto jiilaalka, waxaad u baahnaan doontaa inaad kuleyliyo dheeraad ah u bixiso shimbiraha.
Arrinta ku saabsan quudinta shimbiraha ee noocaan ah, wax walba waa sahlan. Siiriyadu waa inay saldhig u noqdaan cuntada, labaduba waxay leeyihiin foomka qalalan iyo bararsan.
Iyada oo bilawga guga ee cuntada waa inaad u gashaa cagaarka qaabka cawska ama dushooda dalagyada xididka. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la siiyo turkiga khudaarta jiilaalka ee aad diyaarineyso jiilaalka.
Dukaanka khaaska ah, waa wax macquul ah iibso fiitamiinada dheeraadka ahkaas oo ka caawin doona shimbiraha inta lagu jiro jiilaalka si loo ilaaliyo dheelitirka ee xubno raad ula jirka, iyo sidoo kale in aan lumiyo miisaanka.
Tani waxay dhif u tahay sababtoo ah shimbirahaasi waxay ku nool yihiin kaliya degaan diiran.
Laakiin haddii aad si taxadar leh u ilaaliso turkiga, ka dibna uma baahnid inaad iibsato broilers aan la garanayn sida loo shubay.
Waxaa ka wanaagsan inaad ka iibsato poults turkey yar ee Black Tikhoretskaya Black iyo korin turkiga caafimaad leh.
Beerta lo'da ee dayrta
Mexican "old man" waa cakalotsereus cactus
Baalshiinka badda: Beedka iyo bogsashada guryaha jirka
Noocyo badan oo qajaarka duulaya
Fasalka cajiibka ah ee magaciisa ku qoran - pear Fantastic
Sida loo takhaluso miraha dhirta
Caadi ahaan, Qudhaanjada waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo dhisme la'aan ah iyo caawiyayaal wanaagsan dadka si ay ula dagaallamaan cayayaanka khatarta ah ee kala duwan. Laakiin for beeraley iyo bannaanka, cayayaanka waa masiibo dhab ah. Qowlka ayaa si kedis ah u dhaqma. Waqtiga gaaban, lambarkoodu waxay kordhin karaan dhowr jeer daraasad. Read More
Maxaa la sameeyaa haddii cayayaanka cad iyo cayayaanka kale lagu xoqo ciidda orchids, oo ay tahay in ay walwal ka walwasho?
Cudurka Digaagga: Calaamadaha, Ka Hortagga iyo Daaweynta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beeraha digaaga 2020